Yaa ka Dambeeya Dilka Qorsheysan ee Suxufiyiinta!? 187 Wariye – 6 Sano Gudahood - iftineducation.com
Yaa ka Dambeeya Dilka Qorsheysan ee Suxufiyiinta!? 187 Wariye – 6 Sano Gudahood
aadan21 / March 10, 2012
iftineducation.com – Burbukii Ragiimkii Siyaad Barre kadib oo ey ka soo wareegtay 21 Sano waxaa Dalka kadhacay Colaado Sokeeye waxaana burburay adeegi guud ee Bulshada sida: Caafimaadka, Waxbarashada, iwm. Gabi’ahaan Bulshada Soomaaliyeed Waxaa saameeyay Barakac Baahsan iyo Burbur Hantiyadeed, waxaa soo foolsaartay Shaqa la’aan baahsan.
Burbukaas Baahsan waxaa ka dhex dhashay Shirkado badan oo Gaarka loo leeyahay sida: Shirkadaha Isgaarsiinta, Shirkado Diyaaradaha, Xawaalado, Dugsiyo, Jaamacaddo iyo Saxaafad “xor ah” kuwasoo run ahaan intooda badan ey Kobciyeen Horumarka Dalka Soomaaliyeed.
Hadaan xogaa yar ku Hakano Mowduuca Saxaafadda: Waxaa la dhihikaraa, waxaa si siman isku-barbar socday Labo “Line” oo uu midyahay ilbaxnimada & Horumarka Saxaafadda Xorta ah ey u keentay Bulshada Somaaliyeed oo dhinac ah, Dhinaca kalenah uu yahay Dhibaatada loo geysto Wariyaasha ku howlan Saxaafada.
“Howsha Saxaafadda waa Howl Jihaad-ka u dhiganta, waayo Waagii baryaba waxaan la kowsanaa Khatar, sida Handadaada, Hanjabaada iyo Humbaaleynta. Waxaad ogtahay gortaad Gurigaaga ka baxeysid ee ma ogid adoo Nabad ah gortaat Gurigaaga kusoo noqoneysid…” – Sidaas waxaa jiri Wariye Cali Cabdulle oo lagu Dhaawacay Bartamihii 2011 magaalada Boosaaso, hadana kamid ah Wariyaasha faraha badan ee ku nool Magaalada Jabuuti.
Wariyaasha vs. Siyaasiyiin ku Sheega!
Tusaale: Waxaad Maantay sii deysay War, Warkaas oo ahaa War Xaqiiqada ku saleysan, waxaa ku soo wacay Siyaasi-ku-sheeg wuuna ku handaday “Hadii aad markale sii deysid Warkaas, wixii kugu dhaca…” ama sidaaso kaleyto waxaad sii deysay War, waxaana ku soo wacay Kooxda Shabaab ama Dowlada KMG, ama Warlord-ka ama ama… Marka Aaway Xoriyada Saxaafadda!???
Saxaafadda waxey u Fahmeen wixii ayaga kaliya ka Qosliya, hadaba Aqristoow isweydii oo Aqbaarta isku si uga Qoslinkarta Godanne ama Rooboow, Mahiga ama Shariif Sakiin, Shariif Lamood ama Cabdiweli, Gaandi ama Morgan, Faroole ama Siilaanyo… Ma jirtaa Hal Aqbaar ah oo intaas kawada Qoslisiin karta?
Siyaasi isku-sheegga Soomaaliyeed wuxuu ku doodada waxaan rabno aan bi’inno saxaafadduna yayna wax iga sheegin. Wuxuu rabaa inuu wax ku xado Magaca Ummadda iyo Hantida Qaranka, haddana aan farta lagu fiiqin.
Saxaafaddu Waa Awooda 3-xaad! – 3RD POWER!
Saxaafadu awaa awooda 3-xaad ee Dalka, Siyaasiinta Soomaaliyeednah waa iney tixgaliyaan Xuquuqda Saxafiyiinta!
Sida aan Horay usoo sheegnay Dhinacyada isaga soo horjeeda Siyaasad ku sheega Soomaaliya ayey Shaqaalaha Warbaahintu kala kulmaan Dhibaatooyin baaxad weyn Sida: Dilal bareer ah, dhaawacyo, xarig iyo Jirdil naafa reeb ah.
Waxey Saxafiyiinta sidookale Dhibaato qarsoon kala kulmaan Milkiilayaasha Warbaahineed oo inta badan (97%) aan Aqoon u laheyn Saxaafada balse Xaruumaha u furtay qaab Ganacsi sida loo furanjiray Xalwo Hilaalka ama Biibitooyinka, kuna tunta Xuquuqda Shaqaalaha, iyagoo inta badan ku amra baahinta hadafkooda Siyaasad Beeleed.
Wariyaasha Qaarkod waxaa la siiyaa Mushaar aan kufilneen halka Qaar ey helin Mushaar, kuna Shaqeeyaan iskaa wax u Qabso.
Hadaba isbadalada xagga Saxaafada ah ee Dalka ka dhacay ay aad u badanyihiin ayaa hadana Su’aasha is weydiinta mudan waxaa ay tahay Yay tahay cidda Ugaarsiga, dilalka iyo Tacadiyada kala duwan la daba taagan Weriyaasha Soomaaliyeed ee lagu dilo gudaha Dalkooda Hooyo?.
2006 ilaa 2011 waxaa la dilay inta la hubo 187 Wariye oo ey ku Jiraan Wariyaal Caan ah oo Labeenta Aqooneed ee Saxaafada Soomaaliyeed Tusaale u ahaa. Dilalkaas inta ugu badan waxey ka dhaceen Muqdisho iyo Maamulka Puntland.
Wariyaalka lagu dilay Muqdisho waxaa falalkaas fullin jiray intooda Badan Niman Gafuurka soo duubtay “Terror-Action”. Dowlad, UN ama Hay’add kale oo Falalkaas Argagixisada ah Baaris ku sameeyay Habayaraatee Ma Jirto! Taas ma loo fasiran karaa iney Dowlada iyo UN-ka raali ka yihiin Falalkaas iney sidaas u dhacaan?
Wariyasha ka bad-baaday Dilalka bareerka ah ee loo geystay Saaxibadood ayaa qaba in kuwa Wariyaasha laaya ama leyn jiray ay ahaayeen Ciidamadii Itoobiya, dowladda KMG ah, Maamulka Faroole iyo sidoo kale Maleeshiyaadka Shabaabka.
Dilalka Wariyaasha ee 2011 ilaa 2012
Laga soo bilaabo dabayaaqadii Bishii December ee Sanadkii tagay ilaa Bishani March ee 2012 waxaa gudaha Soomaaliya lagu dilay 4 Wariye oo ay ku jiraan Labo Agaasimayaal.
Kuwo kale ayaa Jirdil loo geystay, kuwanah waxey ilaa hada ku jiraan Xabisyada TFG-da, Maamulka Faroole iyo Maamulka Siilaanyo.
Soomaalidu waxey tiraahdaa: Meyd maxaa ugu dambeeyay, markaasaa la yiraahdaa Midkaas la sii wado. Tusaalahaas waxaan ula jeednaa, Bishaan Maarso 5-dii ayaa Bartamaha Waqooyiga Gaalkacyo waxaa toogasho lagu dilay Wariye Cali Axmed Cabdi (AUN) iyadoona Masuuliyada Dilka Wariyahaasi loo saaray Kooxda Shabaab.
Marxuum Cabdi oo 24-jir ahaa aya waxaa la toogtay isagoo kusii socda gurigiisa, waxaana dilay rag hubeysan oo wajiyada qarsaday, iyadoo Maamulka Puntland ay ku eedeeyeen dilkaas Al-shabaab.
Baaris ey Badweyn.com sameesay eyee si hoose u ogaatay in Dilka Allahu u naxariistee Wariye Cali Axmed Cabdi uu ka dambeeyay Maxamed C/raxmaan Faroole oo ah Wiilasha Faroole mid kamid ah.
Sidoo kale Maxamed Faroole 17.02.2012 wuxuu rabay inuu Dil ku fuliyo Cabdi Xayi Garaad iyo Cabdisalaam Caato oo illahey ka badbaadshay, Kadib markii loo soo Gurmaday.
Maamulka Badweyn.com ayaa dhawaan xiray xafiiska Badweyn.com uga furnaa magaalada Garoowe. Waxaana go’aankan la qaatay markii ay kala joogsan waayeen Hanjabaadaha lagu hayo Shaqaalaha Badweyn.com.
Shaqaalaha xafiiska oo gaarayay 2 Wariye ayaa loo soo gudbiyay farriimo hanjabaad ah, kuwaasoo qaarkood loogu hanjabay in la gawraci doono hadii ay kasii shaqeeyaan Garoowe.
Waxaa jira Cayayaan iyo Canaasiir badan oo neceb Suxufiga iyo Saxaafadda runta sheegta. Yaa mooggeyn, in Siyaasiin ku sheegta Soomaaliyeed ey yihiin kuwa deriska isku dira oo Nabadda wiiqa? Jawaabtu, Waa badankood!
Ceelka Shidaalka ee Maamul Goboleedka Puntland: Ma Hanti Qaran, mise Dhaxal-beeleed ?.
Xarakada Shabaab oo Gacanta kusoo dhigtay Saraakiil Itoobiyaan&Ciidamo daawo